पहुँचका आधारमा हुने रकमान्तर रोकिनुपर्छ : कृष्णभक्त पोखरेल - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com पहुँचका आधारमा हुने रकमान्तर रोकिनुपर्छ : कृष्णभक्त पोखरेल - खबर प्रवाह
भरतपुर : चितवनमा केही वर्ष यता राष्ट्रिय गौरवका योजना पर्ने क्रम बढेको छ । चितवनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पनि विकासले फड्को मार्दैछ । भरतपुर महानगरको मुख्य शहरी क्षेत्र सहित १० वटा वडा, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका मिलेर यो निर्वाचन क्षेत्र बनेको हो । पहाडी भुगोल रहेको इच्छाकामनामा विकास गर्न थोरै बजेटले नपुग्ने देखिन्छ । यही निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र समेत बनाउने काम अघि बढेको छ । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जितेका कृष्णभक्त पोखरेलले जितेका थिए । उनी प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति समेत हुन् । पोखरेल नेकपा चितवनको सचिव समेत हुन् । सांसद पोखरेलसँग विप्लव काफ्लेले विकास, कानुन र राजनीतिबारे गरेको कुराकानी सार
चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सांसद बन्नुभयो, यो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास के के भए ?
चितवनको मध्यभागमा मेरो निर्वाचन क्षेत्र पर्छ । चितवनको सदरमुकाम भरतपुर पनि यहीँ पर्छ । भरतपुर महानगरको मुख्य शहरी भाग पनि समेटिएको छ । अत्यन्तै विकट मानिने जुम्लासँग तुलना गर्न मिल्ने पहाडी भेग इच्छाकामना गाउँपालिका पनि यहीँ छ । कालिका नगरपालिकाको ९० प्रतिशत बढी चेपाङ बस्ने क्षेत्र २ नम्बर वडा पनि यहीँ पर्छ । २ नम्बर क्षेत्र पहाड र मधेसको अन्तरघुलन भएको क्षेत्र हो । शक्तिखोरदेखि फिस्लिङ जाने बाटो झण्डै ७८ करोड लागतमा बन्ने काम सुरु भइरहेको छ । चितवनको पुरानो सदरमुकाम उपरदाङगढी पुग्न भोर्लेबाट बाटो लैजाने योजना छ । रणनीतिक सडकका रुपमा परेको योजना छ । यो वर्ष ३ करोड बजेट थियो । भोर्लेबाट करिव ७ किमि दक्षिणपूर्व गएपछि पुरै पहाडी मौसम पाइन्छ । चैत वैशाखमा समेत सिरक ओडेर सुत्नुपर्ने हावापानी छ । चौकीडाँडा, दाहखानी लगयातका ठाउँमा सुन्तला खेती व्यापक छ । धेरै पहिला काठ्माण्डौबाट मधेस झर्दा प्रयोग हुने बाटो धादिङ–हात्तिवाङ–सिराइचुली बाटो स्तरोन्नतीको काम भैरहेको छ । सबै सिजनमा हिड्न मिल्ने बनेको छ ।
इच्छाकामना–६ को ढुंग्रे जहाँ बाटो थिएन, जलवीरेबाट करिव ३ सय मिटर मात्रै बाटो थियो । जलवीरे–ढुंग्रेसम्म करिव २० किमि बाटोको युद्धस्तरमा काम भैरहेको छ । काउलेमा विद्युतीकरणको काम भैरहेको छ । तर, पोल र तार गाड्ने काम भयो । चितवन वा धादिङ कहाँबाट लाइन छाड्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा विद्युत उपभोग गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । सानो वस्ती छ । चितवनबाट टाडा पर्ने, धादिङबाट नजिक पर्ने क्षेत्र हो । तर, विद्युत महसुल उठाउन कठिनता आउने भन्दै धादिङबाट लाइन छोडिएको छैन । यो समस्या हल गर्न लागिपरेका छौँ । साइकलबाटै लोपोन्मुख जनावर हेर्न मिल्ने गरी भरतपुर महानगर क्षेत्रमा साइकल लेन सहितको रिंगरोड बनाउने काम सुरु भइरहेको छ । डिपिआर बन्दैछ । सांसद कार्याकालमै यो योजना पूर्ण हुनेछ । भरतपुर–१ जलदेवी क्षेत्रमा कोरियन सरकारको सहयोगमा ल्याण्डफिल साइट बन्दैछ । एक घण्टा पानीका लागि हिड्नुपर्ने अवस्था छ । कविलास चौकिडाँडामा खानेपानी आयोजना सुरु हुदैछ । कुरिनटार, जुटपानी खानेपानी आयोजनालाई विस्तार गरिदैछ । कालिकामा कर्वड हल बनाउन १ करोड छ । पूर्वीराप्तीमा तटबन्धनको काम हुदैछ । राज्यको प्राप्त स्रोतसाधनको अधिकतम्् प्रयोग गरेर समृद्ध बनाउन लागेका छौँ ।
विगतमा तराई समृद्ध कार्यक्रम अन्र्तगत ४ अर्ब चितवनले पाएको थियो । त्यो पैसाको उच्च प्रयोग ३ नम्बरमा भयो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब जति भएको छ । ३ अर्ब ३ मै प्रयोग भएकाले धेरै गएको देखिनु स्वभाविक हो । विगतमा अर्थमन्त्रीहुँदा सुरेन्द्र पाण्डेले धेरै योजनालाई पाइपलाइनमा पार्नुभएको छ । तीनै योजना क्रमागत रुपमा छन् । यसपटक आउने त्यस्तो कम बजेट २ नम्बर क्षेत्रमा परेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयबाट आएका २३ योजना मध्ये १२ योजना २ नम्बर क्षेत्रमै छन् । भौतिक योजना मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका योजनामा पछि परेको छैन । योजनामा बराबरीनै छ । बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली पहुँचका आधारमा, मन्त्री, नेतामुखी बजेट हने गरेको देखिन्छ । तर, अन्तिम अवस्थामा रकमान्तर गरेर बजेट ल्याउने प्रणाली गलत प्रणाली हो । असारे बजेट बाड्ने क्रममा पहुँचवाला नेता जहाँ पुग्छन्, त्यही जाने अवस्था छ । म विधि निर्माणमा सक्रिय छु । भोली मन्त्री हुने, आँफुलाई कसो गर्दा राम्रो हुन्छ सोचेर सचिवहरुले खोजी खोजी बजेट रकमान्तर गरेर पठाउँदा त्यस्तो भएको हो । ठुला परियोजनामा २ नम्बर क्षेत्र ओझेलमा परेको छैन ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजना मध्ये सडकमै धेरै लगानी भएको देखिन्छ । धेरै भरतपुरमा थोरै इच्छाकामनामा योजना परेका थिए । विकास विकटमा धेरै हुनुपर्ने होइन र ?
जनता, भोट पनि हेर्नुप¥यो । भरतपुरमा १० वडा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । एउटा गाउँपालिका बराबरको क्षेत्र हो । भरतपुरमै पनि समस्या छन् । अलि बढी ध्यान विकट क्षेत्रलाई दिएकै छु । राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम पार्न लागेको छु । गैरीबारी र उपारदाङगढी बाटो तीन करोड, भोर्ले दाहखानी बाटो तीन करोड, त्यो रकमान्तर गरेरै ल्याएको हो । ठुला गौरवका योजना ल्याउँदा पहाडी क्षेत्रलाईनै ध्यान दिएको छु ।
सांसदकै अगुवाईमा खर्च गर्न सक्ने गरी बढाएर ६ करोड छुट्टाइएको छ । यो कति न्यायोचित हो ?
चुनाव लड्दा सांसद नीति निर्माणकर्ता हो । नीति प्रयोग भयो भएन निगरानीकर्ता हो । त्यसकारण मलाई भोट दिनुस् भनेर हिडेका थियौँ । तर, भोट माग्दा बाटो पीच गर्छु, ढल व्यवस्था गर्छु । विद्यालयको छाना फेर्न सहयोग गर्छु भनेर मत माग्ने प्रवृत्ति सुर्धानैपर्छ । भारत, पाकिस्तानमा पनि अभ्यास छ । जनतासँग जोडिनैप¥यो । दलभित्र पनि बहस चलेको छ । आगामी निर्वाचनमा भोट माग्दा अब स्थानीय तहले बाटो बनाउने, अलि ठुला प्रदेशले, राष्ट्रिय गौरवका योजना संघीय सरकारले बनाउने हो भनेर बुझाउन जरुरी छ । सांसद विकासमा जोडिनु अन्याथा होइन । जनपक्षिय थुप्रै ऐन कानुन बनाउन मैले खेलेको भूमिकाबारे जनताले काम ग¥यो भनेर बुझ्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तर, सांसद विकास कोषका कुनै पनि योजनामा भ्रष्टाचार भएको छैन । उपभोक्ताले पनि त्यस्तो काम गरेका छैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । व्यापक सदुपयोग भएको छ । योजना छनौटमा मेरो मात्रै दबाब रहेको छैन, सर्वपक्षीय छलफलबाटै योजना बनाउने गरेका छौँ । तर, सांसद कोषको बजेट दुरुपयोग भएको पाइएमा सांसद पदनै बर्खास्त गरेर कडा कारवाही गर्नुपर्छ । सांसद विकासको संवाहक हो, विकाससँग जोडिनुहुदैन भनेर कल्पना गर्न सकिदैन ।
उबेला चितवन देशकै राजधानी बनाउने चर्चा चलेको थियो । त्यो बेला यहाँपनि देशकै राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने ‘लविङ’ मा हुनुहुन्थ्यो । अहिले त ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी समेत नबन्ने अवस्था आयो नी ?
प्रदेशको भुगोल बन्दा चितवन केन्द्रमा परेन । देशको केन्द्रमा छौँ । देशकै राजधानी बनाउन हाम्रो बल त्यति पुगेन । प्रदेशको हुन्छ भन्ने आशा थियो । राजधानी नभएपनि विकासमा पछि पर्ने भन्ने होइन । मुम्बई, मधरास देशको राजधानी होइन, तर दिल्ली भन्दा कम महत्व राख्दैन । न्यूर्योक, मृलवर्न, सीड्नी राजधानी नभएतापनि विकासमा पछि छैनन् । चितवनलाई आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक हबका रुपमा चितवनले सम्भावना बोकेको छ । कालिकामा औद्योगिक क्षेत्र, बन्दैछ । डिपिआर बन्दैछ । यो बनेपछि चितवनकै प्रतिष्ठा बढाउँछ ।
संविधानबारे जानकारी गराउन ‘एक घर–एक संविधान’ को अभियान चलाउनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्नुभएको थियो, तर कार्यान्वयनमा आएन नी ?
संविधान निर्माणमा अर्बौ खर्च भएको छ । लाखौँ जनताको अभिमत पनि लियौँ । तर, जनताको अभिमत यसकारण ग्रहण ग¥यौँ, गरेनौँ भनेर जवाफदेही संविधानसभा बनेन । सुझाव कति ग्रहण भयो, कति भएन, तपाइहरुले हेर्नुस है हामीले यस्तो संविधान बनायौँ भनेर जनताको घरमा संविधान पनि पठाएनौँ। धेरै ठुलो कुरा थिएन । एक प्रति एक घरलाई दिने । मातृभाषामै तयार गरेर दिउँ भनेर भन्दै आएको छु । कानुन मन्त्रीलाई पनि भनेको छु । आगामी दिनमा यसमा गम्भीरताका साथ छलफल हुन्छ । यो गर्नैपर्छ । यो काममा सरकार लागोस् ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ, थुप्रै नयाँ ऐन कानुनहरु बनेका छन् । विगत भन्दा जनताको पक्षमा भएका नयाँ प्रावधानहरु के के छन् ?
इतिहासमै परिकल्पनानै नभएका विषयहरु कानुनका रुपमा आएका छन् । कुनै नागरिक भोकै बस्नुनपर्ने, उसको खाद्य अधिकार हुने भन्ने कानुन बनायौँ । संविधानमा लेखेका थियौँ, कानुन पनि बनायौँ । राज्यसँग खान देउ भन्ने पाउने अधिकार दिइएको छ । बासस्थान छैन, बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने बासस्थान देउ भन्न सक्ने अवस्था छ । न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य माग गर्न सक्ने अवस्था छ । माध्यामिक शिक्षासम्मको निःशुल्क पाउने अधिकार छ । १ सय दिनको रोजगारी दिनुपर्ने, दिन नसके ५० दिनको बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने कानुनमा आएको छ । साउन २९ गतेसम्म १९ वर्षमा विवाह हुँदा वैद्य हुन्थ्यो । भदौ १ गतेदेखि २० वर्ष नपुगेसम्म गरिने कुनै विवाह वैद्य हुदैन । विवाह भैसकेको छ, अंशबण्डा, सम्बन्धविच्छेद पनि भएको छैन भने अर्को विवाह गर्न पाइदैन । बलात्कार गरेर हत्या गर्दा २० वर्ष जेल हुन्थ्यो । अब आजिवन जेल बस्नुपर्छ । ६ प्रकारका अपराधमा आजिवन काराबासको व्यवस्था भएको छ । छाउपडी प्रथा अब दण्डीत हुन्छ । विश्वलाई चमात्कारिक गराउने गरी कानुन बन्दा झण्डै ९९ प्रतिशत कानुन सर्वसम्मत पारित भएका छन् । १ सय ६५ कानुन सर्वसम्मत पारित भए ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कस्ता कानुन बनाउँदैछ ? चूनौती के छन् ?
१ सय ७१ कानुन पास गरेर ‘हाउस’मा पेश भैसकेको छ । समितिमा प्रशासकिय अदालत सम्बन्धि विद्ययेक तुरुन्तै पास हुदैछ । मुलुकी संहितामा विभिन्न संसोधन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । चिकित्सक सम्बन्धि नमिलेको व्यवस्था मिलायौँ । निर्माण व्यवसायीको पनि आवाज उठिरहेको छ । अरु क्षेत्रगत माग पनि उठेका छन् । विगतमा पास भएका कानुनमा कहाँ कहाँ संसोधनको जरुरत छ, नयाँ कानुन निर्माण के के गर्ने भनेर कानुन आयोगसँग निरन्तर संवादमा छौँ । संविधान अनुकुलका केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ । अन्तरप्रदेश परिषद् कसरी बनाउने, अन्तरप्रदेशको समन्वयकारी निकाय कसरी निर्माण गर्ने, प्रदेश प्रदेशबीचमा भएका विवाद, प्रदेश र स्थानीयतहबीचका विवादहरु, समाधानका उपाय के हुने, कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी कानुनको ड्राफ्टको चरणमा छ ।
बलियो सरकारले ल्याएको बजेट ‘पुरानो निरन्तरता’ जस्तो मात्रै देखियो नी ?
ठुलो ‘एमाउण्ट’ हामीसँग छैन । सामान्य प्रशासनिक खर्च बाहेक अरु नचल्ने आम्दानी छ । यस्तो परिस्थितिमा धेरै फड्को मार्ने स्थिति छैन । विद्युत ८ सय जति मेघावट उत्पादन छ । २५ सय मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने संकल्प छ । १ सय १२ वर्षमा नभएको कुरा ४ वर्षमा गर्ने भनेर संकल्पित भएका छौँ । यसैवर्ष ४ सय ५० मेघावट विद्युत जोड्ने लक्ष्य छ । बाटो विस्तार, नयाँ राजमार्ग पहिचान गरेर निर्माण हुँदैछ । धेरै ठुलो कुरा गर्नलाई हामीसँग बजेटनै छैन । दशैसम्ममा गौतम विमानस्थल भैरहवामा चलाउने छ । अर्को वर्ष पोखरामा, त्यसपछि निजगढमा चलाउने योजना छ । कृषकलाई सरसहयोग, युवालाई रोजगारी दिने कुरा छन् । चमात्कारि हुने कुरा त छैन, बजेट पनि छैन नी ।
बलियो स्थायी सरकार छ, कैयन विद्ययेकका कारण सरकार आलोचित भैइरहेको छ । सरकार विद्येयक बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग किन छलफल नगरेको होला ?
सरकारले विद्येयक बनाउँदा कर्मचारी, मन्त्रीमात्रै बसेर बनाउने हुँदै होइन । जस्तो मिडिया काउन्सील विद्येयक बनाउँदा अनुभवीसँग राय सुझाव लिएर बनाउँदा के हुन्थ्यो र ? सांसदमा आइसकेपछि अब राय सुझाव लिने काम हुन्छ । ३ बील मात्रै प्राइभेट बीलका रुपमा पारित भएका छन् । अरु सबै गर्भमेन्ट बिल छन् । जसका लागि कानुन बनाउने हो, उसका लागि खुशी बनाएर बनाउनुप¥यो नी । त्यो कुरामा सरकार चुकेको छ । सरकराले विद्ययेक ल्याउनु उसको दायीत्व हो । कहिँकतै कमजोरी रहेछ भने सच्याउन पाइन्छ नी । सांसदहरु पनि छन नी । नेकपाले कुनैपनी बीलमा ह्रवीप जारी गर्दैन । सरकारले ल्याउँदैमा सर्मथन होइन । गुठी विद्येयक ल्याउन सरकारलाई संविधानलेनै दायीत्व तोकेको हो । तर, ल्याउँदा सरोकावालासन्ग बढी छलफल गरेर ल्याएको भए यसरी फिर्ता लिनुपर्थेन । फिर्ता नलिएपनि सांसदले जनताका भावना बोल्थ्यौँ नी । विद्ययेकलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार त ‘पार्लिमेन्ट हाउस’ लाई छ ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड सरकार पुर्नगठन हुन्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिदै हिडेको पाइन्छ । सरकार फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् । कतै सरकारका कामप्रति जनतामा नैराश्यता छाएको हो ?
सरकारको मुल नेतृत्व तत्काल फेरिदैन । तर मन्त्रीहरु त कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यंकन गर्नुप¥यो नी । परिणाम दिन नसक्ने, आँफुले ल्याएका विद्येयकमा ‘कन्फिेण्ट’ छैन, अध्ययन छैन, सरोकारवालासँग परामर्श लिएको छैन भने ती मान्छे राखिरहनु हुदैन, त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । उनीहरुको कामको परिणाम कस्तो आयो भनेर मुल्यांकन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा कतै छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा सहमति छ भन्ने कुरा उठाइरहनुभएको छ । हाम्रो तहसम्म त्यो सहमति आएको छैन । त्यस्तो सहमति भएको छ भने आन्तरिक छलफलको विषय हुनसक्ला ।
तत्कालिन एमाले चितवनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । नेकपा चितवनको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । आत्मग्लानी भएको छैन ?
४१ सालमा कम्युनिष्टको सपथ खाँदा टुटफुट कम्युनिष्ट देखेको हो । एकतावद्ध कम्युनिष्ट बनोस् भन्ने सपना देखेको व्यक्ति भएकाले यो एकताप्रति उत्साह, उमंग र उर्जा छ । जिम्मेवारी कुरा गौण विषय हो । म धेरै निरुत्साहीत छैन । आजभन्दा १०–१२ वर्ष पहिल्यै सचिव भन्दा माथिल्लो पदमा उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेको, अध्यक्ष भैसकेको थिएँ । चितवनमा एकलौटी चुनाव जिताएर ७ स्थानीय तहमा ६ वटामा तत्कालिन एमालेको ‘मेजोरिटी’ छ । त्यो पार्टीको अध्यक्ष म सचिवमा बस्दा पूर्व एमालेकाले पीडाबोध गर्नुभएको छ । तर, प्रचण्डको गृहजिल्ला हो । यो जिल्लाको पार्टीमा विवाद छैन भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । कहिलेकाँही मर्का, अन्यायलाई पनि सहदै अमृत मानेर पिउनुपर्छ । त्यसलाई मुख्य मुद्धा बनाएको छैन ।
कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हो । तर, सरकारले निकै चिढाउने काम गरेको विश्लेषण हुन थालेका छन् नी ?
संविधान निर्माणमा तीन मुख्य दलनै मिलेका थिए । संविधान कार्यान्वयनमा पनि मिल्नुको विकल्प छैन । संविधान आइसकेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री, शुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र माओवादीबाट एउटा नेतृत्व लिएर चुनावसम्म जाउँ । १५ वर्षको साझा सरकारको परिकल्पना भएको थियो । तर, कांग्रेसले मानेन । कांग्रेसले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदियो– प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिन्छ, सबैलाई मिलाएरमा सरकारमा जान सकिदैन । शुशील कोइराला परास्त हुने गरी चुनावमा लड्नुभयो केपी ओलीसँग । त्यहीबाट सहकार्यको यात्रा कांग्रेसल टुटायो । अब समृद्ध नेपाल र खुशी नेपालीको यात्रा छ । कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार एकलौटी ढंगले चलाउँछौँ भनेर कल्पना गर्नुहुदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त बन्दैन । नेकपालाई मात्रै सरकार चलाउ भनेर जनताले मत दिएका छन् । त्यसैले सरकारमा सहभागि गराउन सकिदैन । कांग्रेसले ०४८ सालमा बहुमतमा थियो, त्यो बेला विपक्षिलाई सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष दिनलाई ९ महिनासम्म झुलाएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका केही समितिमा समेत सभापति कांग्रेसलाई दिइएको छ । सत्तामा कांग्रेसहुँदा विपक्षलाई निर्मम, निरुंकुश व्यवहार गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकारले त्यस्तो गरेको छैन । चिढाएको छैन ।
जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३ सय मिटर ‘लिक’ बाढीले बगायो